Phupha ngeTotshi Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Kumnyama zacima izibane. Ngoku kuthweni? Ukongeza kumakhandlela, isibane ngokungathandabuzekiyo lukhetho lokuqala lokufumana ukukhanya kancinci. Ngelixa amakhandlela anokucima okanye aphume xa uhamba, le ayisiyongxaki yokukhanyisa, inokusetyenziselwa ukukhanyisa indlela kakuhle. Kuxhomekeka kubungakanani kunye nokukhanya kwetotshi, ayikhanyisi ngokukhethekileyo kuphela, inokugubungela indawo enkulu.
1 Uphawu lwephupha «ilanteni» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ilanteni» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ilanteni» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ilanteni» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngaphakathi ekutolikeni ngokubanzi kwamaphupha, uphawu lwephupha "isibane" siqondwa njengophawu xa uphupha ukuba oku kufuneka kuzise ukukhanya kumbandela onamathandabuzo. Ngokukodwa xa uvula isibane ephupheni, kufanele ukuba sesakho el mundo yomlindo. i ngcebiso sebenzisa kumcimbi othile. Nangona kunjalo, ukuba iphupha lizama ukukhanyisa isibane esaphukileyo ephupheni, iinzame zakho kwihlabathi lokuvuka ziya kuba lilize. Nangona uza kwabelana ngolwazi lwakho, oku akuyi kukhokelela kwimpumelelo oyifunayo.
Ukubona kwethotshi njengomqondiso wephupha kubonisa ukuthandabuza okanye kunzima ukuqonda iimeko. Ukuphupha kufuneka uthathe oku kunye naye ebomini bokuvuka. Atención dibana. Ukuba iphupha likhanyisa isibane ephupheni, uya kufumana uncedo kwimeko enzima okanye uncede omnye umntu. Isibane esiqaqambe kakhulu njengophawu lwephupha luphawu lobume obonwabisayo bemvisiswano. Ukuba isibane sikhanya kancinci ephupheni, oku kubonisa amabala afileyo omphefumlo. Ukuba isibane sesibane siyaphuma ephupheni, umphuphi uboniswa ukuba wakhe Ubomi bomphefumlo kwilizwe lokuvuka awuyazi ingcebiso ekufuneka uyenzile malunga nomcimbi othile. Ukuphupha kufuneka kufunwe uncedo kunye noncedo kwabanye abantu ebomini bokuvuka.
Uphawu lwephupha «ilanteni» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwembono yengqondo, iphupha lifumana kuphela "isibane" ngophawu lwephupha. ubunkokheli obuncinci kunye nobulumko kwihlabathi lokuvuka. Kuba kanye njengokuba isibane sikhanyisa indawo encinci ephupheni, iphupha eli liya kubandakanya inxenye encinci yengxaki okanye umba wokuvuka kobomi. Uninzi lwayo aluyi kucaca kuwe.
Isibane esiphupheni sinokuqondwa njengokukhanya kwengqondo. Umphuphi kufuneka ayazi ingxaki okanye imeko enzima ngephupha lakhe. Nangona kunjalo, uya kuba nakho ukuyisombulula le nto kwiindawo ezincinci kwaye ayizizo zonke ngaxeshanye. Ukuba iphupha likhanyisa isibane ephupheni kwaye alitshisi, omnye uya kuba kwihlabathi lokuvuka. Ukulindela ayifumaneki. Ukuvalelisa kwithemba ekudala ulikho nako kunokuzimela emva kwale meko ifana nephupha.
Uphawu lwephupha «ilanteni» - ukutolika kokomoya
Ngokwenkcazo yamaphupha okomoya, uphawu lwephupha "isibane" sizisa kuphela impumelelo encinci kummandla wokomoya kunye naye.